Sideen ku ogaan karaa Pantone midabka? Hal-abuurka khadka tooska ah
Xirfadlayaasha ku jira adduunka farshaxanka garaafyada, naqshadeeyayaasha, sawir-qaadayaasha, qoraal-yaqaannada, iwm. ama qof kasta oo danaynaya adduunkan, aad bay lagama maarmaan u tahay in aqoon loo yeesho sida loo ogaado pantone midabka, taas oo ah, waxa qiyamka Pantone leeyihiin, tusaale ahaan, midabka CMYK ee aan ku isticmaalayo calaamadeyda.
Maqaalkan, kaliya kuma sheegi doonno sida loo ogaado Pantone midabka, laakiin sidoo kale waxaan dooneynaa inaan sharaxno. waa maxay nidaamka Pantone, haddii aadan weli aqoon.
Ilaa 100 midab oo kala duwan ayaa kala saari kara isha bini'aadamkaMidab kastaa wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran iftiinka ama saturationka lagu daro. Dhammaan midabada aan ka helno hareerahayaga, waxay ku xiran tahay sida iftiinka loo cabbiro, tirooyinka waa kala duwan yihiin, waxaan ognahay waxa loo yaqaan, waxaa jira midabyo aan waligood la magacaabin.
1 Waa maxay nidaamka Pantone?
2 Sidee loo ogaadaa Pantone midabka?
2.1 Sida loo ogaado Pantone midabka ee Photoshop?
2.2 Sidee loo ogaadaa Pantone ee midabka ku jira Illustrator?
Waa maxay nidaamka Pantone?
Nidaamka Pantone waa hagaha midabka loo isticmaalo adduunka oo dhan. Hagahan ama warqadan, midabada ayaa loo calaamadeeyay si loo kala saaro iyaga. Warqaddii ugu horreysay ee Pantone waxay soo baxday 1963, iyada oo ujeedadu tahay in la abuuro luqad caalami ah oo chromatic ah, taas oo u oggolaan doonta calaamaduhu inay gacanta ku dhigaan go'aamada midabka.
Aragtida aan ka leenahay midabada waxay ku xiran tahay dhowr arrimood., walxaha meesha ay joogaan, nooca warqadda, qaabka dusha sare, iftiinka, iwm.
Summada Pantone, horraantii 60-aadkii, waxay ahayd shirkad daabacaadda oo ku takhasustay abuurista muunadaha midabka ee alaabta la isku qurxiyo, moodada, iyo qaybta caafimaadka. Lawrence Herbert wuxuu ogaaday xidhiidhka liita ee u dhexeeya naqshadeeyayaasha iyo shaqaalaha dukaanka daabacaadda markay timaaddo daabacaadda mashaariicda iyo midabaynta midabaynta, sidaas darteed 1963 waxa uu abuuray 10-midab Pantone shaxda ama hagaha.
Waqti ka dib, jaantuska Pantone wuxuu noqday qalab loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo xirfadlayaal ka socda adduunka daabacaadda. Maanta, waxaa jira in ka badan laba kun oo midab oo ay siisay Pantone daabacaadda garaafyada.
Sidee loo ogaadaa Pantone midabka?
Mid ka mid ah siyaabaha jira si loo ogaado Pantone ee midabka waa la talinta Buugaagta Pantone, kuwaas oo muunadaha Pantone lagu ururiyo iyo sida loogu dabaqi karo waraaqo kala duwan. Tani waa mid aad muhiim u ah markaad la shaqeyneyso calaamadda calaamadda, halkaasoo midabka astaantaas ay tahay in la soo saaro si isku mid ah oo kala duwan iyo qalabyo kala duwan.
Intaa waxaa dheer, jaantusyada caanka ah ee Pantone, oo ah xariijimo waraaqo ah, ma ururiyaan oo kaliya fikradaha shaybaar midab leh oo magaca leh, laakiin qaacidada loo isticmaalo iyaga iyo wax u dhigma ee RGB iyo CMYK.
Tilmaamahan, midabka aan heli doono ka dib habka daabacaadda ayaa noqon doona mid sax ah; taas la siiyay iyadoo koodka lagu sheegay muunada ka hooseeya, midabka ayaa la aqoonsanayaa mana jiraan wax khaladaad ah oo ku jira tarankeeda. Xusuusnow in shaashadda, midabku aanu la mid ahayn hagaha ama daabacaadda, maadaama kormeeruhu leeyahay habab kala duwan.
Sida loo ogaado Pantone midabka ee Photoshop?
Sida aan ku samaynay kiisas hore, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la furo dukumeenti cusub barnaamijka, waxaad ku furi kartaa cabbirka caadiga ah ama waxaad u habeyn kartaa sida aad rabto.
Talaabada xigta waa dooro sawirka aan rabno inaan dib u eegno si aan u ogaano midabka Pantone ee na xiiseynaya. Iyada oo qalab indho-qabad kaas oo ka muuqda aaladda dhanka bidix, waxaan dooraneynaa midabka sawirka.
Marka aan dooranno midabka aan rabno inaan dib u eegno, waxaan aadeynaa sanduuqyada midabka leh ee hoose ee aaladda oo waxaan ku dhejineynaa afargeeska koowaad, midabka hore.
Waxaan helnaa daaqad pop-up ah, halkaas oo ah midab la doortay oo leh dhammaan qiyamka iyo u dhigma ee RGB, Lab iyo CMYK.
Haddaynu ikhtiyaarka siino maktabad muunad, qiyamka midabka lagu doortay Pantone ayaa soo muuqan doona.
Sidee loo ogaadaa Pantone ee midabka ku jira Illustrator?
Adobe Illustrator waa barnaamij nakhshad oo ku shaqeeya garaafyada vector. Barnaamijka waxa ku jira buugaag midab leh, oo mid walba leh taxane midabyo leh, kaas oo aan u isticmaali karno si aan u soo bandhigno shaqadeena nolosha. Mid ka mid ah buugaagta midabada leh ee uu Illustrator soo bandhigayo waa buugga midabka Pantone, haddii aad leedahay code-ka midabka gurigan, barnaamijku wuu kuu soo saarayaa.
Marka xigta waxaan ku siin doonaa tillaabooyinka aad ku ogaan karto Pantone midabka sawirka.
Talaabada ugu horeysa ee ay tahay in aan qaadno, sida kiiskii hore, waa in aan qaadno furo dukumeenti cusub loogu talagalay daabacaadda. Xaaladeena waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah qiyamka caadada ah.
Marka xigta waxaan aadi doonaa qalabka ugu sarreeya oo aan doorano tab daaqadda, oo raadi ikhtiyaarka ah maktabad swatch oo guji buugga midabka.
Waxaan dooran doonaa mid ka mid ah buugaagta Pantone kuwaas oo noo muuqda, sida aad arki karto buugaag Pantone ah oo kala duwan ayaa soo baxay, mid ay ku qoran tahay Pantone Coated, iyo kuwo kale Pantone Uncoated. Dahaarka Pantone waxaa loo isticmaalaa in lagu helo dhalaal dhalaalaya, iyo Pantone Uncoated waxaa loogu talagalay indho-dareen, matte.
Xaaladeena waxaan dooranaa Pantone Solid Coated, si aan u helno Pantone waxaan u baahanahay waxaan tagnaa liiska buuga Pantone ee la sheegay oo aan dhaqaajino ikhtiyaarka muuji goobta raadinta. Oo bar raadinta ayaa u muuqata meesha aan ku dhejin karno qiyamka Pantone.
Taladeenu waa inaan helno jaantuska Pantone si uu kaaga caawiyo habka xulashada midabka. Doorasho kale ayaa ah inaad soo dejiso App-ka Pantone Studio, qalab midab-qabta ah, labadaba sawirada midabka dhijitaalka ah iyo kuwa runta ah, si fudud adigoo sawir ka qaadaya, xal xoog leh oo loogu talagalay hal-abuurka da'da dhijitaalka ah.
App-kan waad awoodaa dhis palette midabkaaga wakhti kasta iyo daqiiqad kasta oo maalinta ah; raacitaanka baska, shaqada, ama socodka xayawaankaaga.
Midabada Pantone waa mid ka mid ah fursadaha muhiimka ah ee naqshadeynta, loo sameeyay si loo bixiyo heer sare oo sax ah qaabaynta iyo taranka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sideen ku ogaan karaa Pantone midabka?